Mirga namoomaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 9:50 5 Fuulbaana 20219:50 5 Fuulbaana 2021
Komishinichi haadholii daa'ima isaanii waliin hidhaman 19 gadhiifaman jedhe
Naannoo Beenishaangl Gumuuz Godina Matakkal Aanaa Bulan keessatti dubartoonni 19 abbaan warraasaanii badiin shakkaman daa'imman waliin hidhamanii jiran yaadeessaa ta'ufi atattamaan akka gadhiifaman gaafatee ture mana hidhaatii baafamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa (KMNI) beeksise.
...tti maxxanfame 6:10 31 Hagayya 20216:10 31 Hagayya 2021
Itoophiyaa dabalatee Afrikaatti namoonni kuma 44 ol bakka buteensaanii dhabame
Itoophiyaa dabalatee biyyootii Afriikaa kaan keessatti namoonni kuma 44 ol ta'an bakka buteensaanii dhabamuun ibsame.
...tti maxxanfame 13:22 4 Hagayya 202113:22 4 Hagayya 2021
Dhalattootni Tigraay hedduun magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiraatan jumlaan hidhamaa, miidhaan qaamaa fi doorsifni irra gahaa akka jiru himatu.
...tti maxxanfame 8:05 29 Adooleessa 20218:05 29 Adooleessa 2021
Qondaalli poolisii Koloraadoo kun osoo nama to'annaa jala oolcheen ''yoo sochoote sittan dhukaasa'' jechuun doorsisuu viidiyoon waraabame argame.
...tti maxxanfame 11:09 26 Adooleessa 202111:09 26 Adooleessa 2021
Bara kana keessa qofa lammiilee nagaan 1,600 ol Afgaanistaan keessatti ajjeefaman -UN
Akka ragaan Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii (UN)tti bara kana keessa hanga yoonaatti lammiilee nagaan 1,600 caalan ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kun kanarra dabaluu mala sodaa jedhu qaba UN.
...tti maxxanfame 4:35 16 Adooleessa 20214:35 16 Adooleessa 2021
Hidhaan seeraan alaafi dararri namoota nagaarra gahu akka dhaabbatu dhaabbileen mirga namaaf falman gaafatan
Waraana Tigraayiin walqabatee magaalaa Finfinnee dabalatee bakka adda addaatti namoota akka feeteen hidhuufi dararuun qaamolee mootummaan raawwatu akka dhaabatu dhaabbileen mirga namoomaaf falman gaafatan.
...tti maxxanfame 4:28 15 Adooleessa 20214:28 15 Adooleessa 2021
Namoota achi buuteen isaanii dhabame iyyaafachuun eegalamuuf
Namoota achi buuteen isaanii wallaalamee iyyannoon hedduun isa dhaqqabaa akka jiru fi barbaacha eegaluuf akka ta'e Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise.
...tti maxxanfame 15:35 13 Adooleessa 202115:35 13 Adooleessa 2021
Itoophiyaan murtee Mana Maree Mirga Namoomaa UN 'yeroo isaa kan hin eegne' jette
Mootummaan Itoophiyaa yaada murtee Gamtaan Awurooppaa dhimma Tigraay ilaalchisee Mana Maree Mirga Namoomaa UN'f dhiyeessee sagalee caalmaan fudhatama argateen ''yeroo isaa kan hin eegnee fi dantaa siyaasaa of duubaa kan qabu'' jechuun balaaleffate.